Ndị na-eso ụzọ Twitch efu | Zụrụ ndị na-eso ụzọ Twitch | Streamular
Zụrụ Instagram Marketing ngwugwu na-emekọ
Ndị na-eso ụzọ Twitch efu | Zụrụ ndị na-eso ụzọ Twitch
Jiri ndị na-eso ụzọ Twitch tolite ọwa Twitch gị ọsọ ọsọ karịa ka ọ dị na mbụ!
Jiri ọrụ anyị nweta ndị na-eso ụzọ Twitch n'efu bụ ndị dị adị na ebumnuche gị, ma ọ bụ zụta ndị na-eso ụzọ Twitch maka uto ngwa ngwa.
Nweta ndị na-eso ụzọ Twitch efu or Zụrụ ndị na-eso ụzọ abụọ
Ọ bụrụ n’ịcheghị iwe nkeji ole na ole kwa ụbọchị iji rụọ ọrụ atụmatụ, anyị na-enye nhọrọ ndị magburu onwe ha nke na-enyefe ndị na-eso ụzọ 10 n'efu na 20 nwere mmasị na Twitch kwa ụbọchị.
Streamers dị ka gị na-eji ọrụ mgbanwe a iji nweta ndị debanyere aha na-aga n'ihu n'etiti ndị ọzọ Streamers.
Streamular`s ọrụ bụ nchebe na ala! Enwetaghị ntaneti ọwa ntaramahụhụ maka iji ọrụ anyị ma anyị na-arụ ọrụ na nzuzo, nchekwa na nzuzo nzuzo.
Y’oburu n’achoghi ike inweta ndi na-eso uzo ma na-enwe obi uto na ubochi obula, anyi gha akwado atụmatụ a kwụrụ ụgwọ iji nweta nnwale-efu, uto kwa ubochi!
Achọrọ m ndị na-eso ụzọ Twitch n'efu ugbu a!
Soro usoro ndị a dị mfe ma bulie uto ọwa Twitch gị na nkeji!
Na-akpali Ọwa Gị
Ndị na-eso ụzọ Twitch na-eto eto n'efu
Twitch bụ otu n'ime usoro mmekọrịta mmekọrịta na ngwa ngwa na ịntanetị. Ebe ihe karịrị nde mmadụ abụọ na-eso ụzọ na-asọgharị kwa ọnwa, Twitch na-ewu ewu ọ bụghị naanị na ndị na-eto eto kamakwa ọgbọ ndị ọzọ. Site na vidiyo na-atọ ụtọ na ntanetị n'ịntanetị, ndị ọrụ nwere ike ịchọta ụdị ọdịnaya ọ bụla ha na-achọ.
Ihe kachasị mma na-agba ọsọ na-agba ọsọ
You mara na Twitch bụ usoro ikpo okwu vidiyo kacha ukwuu n'ụwa? Mgbe emechara ya, ọ nabatara ndị ọbịa nde 8. Taa, Twitch na-ede ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 43% nke ego niile sitere na ọdịnaya egwuregwu vidio n'ịntanetị. Ọ bụ nnoo ebe ndị iyi na-ebi ndụ na-asọpụta ọdịnaya ha maka ụmụazụ ha. Ọ bụghị nanị na egwuregwu ịntanetị – akụkụ “Creative” dị maka ndị na-ese ihe iji gosipụta ọrụ ha na ndị ọrụ.
E wezụga ntụrụndụ, Twitch abụrụla obodo na-arụsi ọrụ ike ebe ndị nwere mmasị na ihe omume ntụrụndụ nwere ike ịchọta ọnụ. Mkparịta ụka site na mkparịta ụka na mkparịta ụka ndụ na-eme ka ọhụụ Twitch nwee njikọ ma na-ekpo ọkụ. Site na ijikọ Fans na iyi, Twitch na-enye usoro ikpo okwu maka ndị ọrụ iji lelee ọdịnaya dị ụtọ dị n'ụdị mgbasa ozi dị ogologo, ndụ.
Kedu ihe kpatara m ga - eji nwee ndị na - eso ụzọ na Twitch?
Ọ bụghị naanị ịlele ọdịnaya, mana Twitch abụrụla isi iyi dị mkpa maka ọtụtụ iyi. Ndị na-asọ asọ na-amatakarị na ọtụtụ ndị na-ekiri ga-alaghachi wee bụrụ ndị na-eso ụzọ. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-eso ụzọ nwere ike inyere aka melite aha gị dị ka iyi.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ndị na-eso ụzọ ngwa ngwa ma chọọ itinye obere mbọ na ya, ị nwere ike zụta ndị na-eso ụzọ Twitch iji mee ka uto gị na-aga n'ihu.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, Twitch enyerela ndị na-asọ mmiri ka ha nweta ọtụtụ nnata ego. Ndị na-egwu mmiri na Twitch nwere ike nweta ego n'ụzọ dị iche iche, dịka site na nkwụnye ego sitere na mgbasa ozi, onyinye, ndenye aha, ịzụ ahịa, na njikọ njikọta. Ndị ọrụ Twitch na-eduzi emeela ka iyi egwu dị ka nhọrọ ọrụ bara uru, yana ụfọdụ ndị ọrụ na-enweta ihe ruru $ 350,000 kwa ọnwa. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị nwere mmasị ime ka Twitch rụọ ọrụ gị, enwere ọtụtụ ụzọ okike ị nwere ike isi jiri ya mee ihe dị ka isi mmalite ego.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmalite ịkpata ego na akaụntụ Twitch gị, ịkwesịrị inwe mgbakwunye mmekọ, nke ga - ekwe omume naanị mgbe ị nwere opekata mpe ndị na - eso ụzọ 50 na ọwa Twitch gị. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-eso ụzọ na-enyere aka melite aha gị dị ka iyi mmiri ma mee ka ọ dịrị gị mfe ịmepụta ego na-ewu ewu ma bụrụ onye ama ama na Twitch.
E wezụga ego, enwere ọtụtụ ihe kpatara ị ga - eji tụlee ịmalite ọnụ ọgụgụ nke ndị na - eso ụzọ Twitch ị nwere ugbu a. Ka anyị lelee ụfọdụ n'ime ndị a n'okpuru:
1. Ika mmata
Brand nweta akara ugo mmụta so na ebumnuche azụmaahịa kachasị mkpa. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụlite azụmaahịa n'ịntanetị, ị ga-emerịrị ya mkpa. Nke a bụ n'ihi na ndị na-azụ ahịa ga-achọ iji ihe onwunwe ha na ụdị nke ha ghọtara.
Mgbasa mgbasa ozi bụ ngwá ọrụ dị ukwuu nke na-enyere ụlọ ụlọ aka dị irè na ngwa ngwa. Ọ na - enyere aka inweta akara gị n’ihu ndị ọzọ ọsịsọ. Ọ na-enye ndị mmadụ ohere ịhụ akara gị oge niile, ọbụlagodi mgbe ndị mmadụ anaghị eche maka ngwaahịa gị.
Lọ ụlọ na-adabere na ọdịdị, yabụ wepụta oge iji tinye ego na ntanetị gị. Bugote ihe ndị mara mma dị ka mkpuchi dị mma na foto profaịlụ. Mee ka ozi banyere onwe gị dị mfe, gụnyere onye ị bụ, ihe ị na-eme, usoro mgbasa ozi gị na otu esi esi kpọtụrụ gị.
2. gwa ihe kpatara ya
Otu ụzọ kachasị mfe iji mee ka a mata okwu ọ bụla bụ site nzipu gbasara ya na soshal midia. Enwere ike ibufe ọdịnaya ọtụtụ oge, nke na - enyere aka mee ka ọtụtụ mmadụ hụ ya. Ọ bụrụ na ị na-anwa ikpokọta uche ọha na eze na ihe kpatara ya, ịdekọ ya na ịkwalite ya na Twitch nwere ike inyere gị aka imezu nzube a.
Positive ọdịnaya nwere ike mfe na-adọta nnukwu viewership na-eme ka ị na-ewu ewu. Iji hashtags ziri ezi nwere ike inyere aka duzie ndị mmadụ na profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta ha na ibe akara gị na n'ikpeazụ gaa na weebụsaịtị gị ma ọ bụrụ na ị nwere. Nke a na-enye gị ezigbo nloghachi na ego.
3. Abawanye na okporo ụzọ
Inwe usoro mgbasa ozi siri ike na-enyere gị aka ịbawanye okporo ụzọ na ọdịnaya gị. Dika mgbasa ozi ndi mmadu na enyere aka na ịrị elu nke uzo maka owa gi, okporo uzo i nwetara site na igwe ihe nyocha na-abawanye. Iji nyere aka na usoro a, ọ dị mkpa iche echiche banyere ihe ị na-eziga na oge ole ị na-ekerịta ọdịnaya. Tụle ihe ndị a ga-eme ka ị nwee ike ịdabere na onye na-azụ ihe ma bulie mbọ ị na-agba n'ịntanetị.
4. Ohere na-eto eto
Zụlite obodo siri ike nke ndị na-eso ụzọ n'ịntanetị pụtara na ị nwere ike ịbụ onye na-emetụta ihe. Nke a nwere ike ịtụgharị n'ime gị ịnweta ohere ndị ọzọ iji nyere gị aka ịkwalite azụmaahịa gị n'ịntanetị. Nkwalite ịkwụ ụgwọ, mmekorita, na ịmekọrịta ihe nwere ike imeghe ọtụtụ ohere iji were azụmaahịa gị na ọkwa ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị wulitelarị ihe na-eso ụzọ siri ike na Twitch maka ọdịnaya egwuregwu gị, ndị ọzọ na-anwa ime otu ihe ahụ nwere ike ịjụ gị ka ị mee otu solo ma ọ bụ ịkọkọrịta nkọwa na ha. Ọganiihu nke mmekorita a nwere ike ịtụgharị na ego abụọ na ndị na-eso ụzọ maka gị.
5. Ihe omuma nke ndi na ege nti
Ka onye na-eso ụzọ gị na-eto, ị ga-amatakwu banyere niche gị. Mee omume ị listeninga ntị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke bụ ịleba mkparịta ụka gbasara isiokwu ndị ejikọtara na channelụ gị. Nke a ga - enyere gị aka ịghọta ihe ndị na - ege gị ntị ji kpọrọ ihe. Iso ha na-akparịta ụka n ’ụlọ ebe a na-akparịta ụka n’Intanet ga-enyekwara gị aka ịmata ihe ndị na-ege gị ntị na-agba mgba na imepụta ọdịnaya ndị na-amasịkarị ha.
Ikwu nke ọma n’etiti ndị na-ege gị ntị, ọ bara uru ileba anya n’otú ndị mmadụ na-asụ na asụsụ ha ji agwa ibe ha okwu. Enwere ike ịdị iche n'ụdị nkwukọrịta nke na-eme n'etiti ndị na-eto eto na ndị okenye. Chee echiche banyere onye ọ bụ na ịchọrọ ịchọta ma dozie ọdịnaya gị.
6. Njikọ ndị ọzọ
Site na ewu ewu na-eto eto, ị ga-ahụ ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịbụ ezigbo njikọ ịnwe. Na mgbakwunye na ịnwe ntọala na-eguzosi ike n'ihe, ị nwekwara ike ịzụlite njikọ na ndị na-ahụ maka ọdịnaya ndị ọgbọ, ndị na-ede akụkọ, ndị na-eme nchọpụta, wdg. Njikọ ọ bụla na-eburu gị ohere ịbawanye ọwa gị mgbe ị na-enyere ndị ọzọ aka.
7. More ahịa
Mgbe ị nwetara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-eso ụzọ, ọdịnaya gị ga-adị ka ihe na-adọrọ adọrọ karị, ị ga-enweta ọtụtụ ahịa. Ọ na-enyekwa gị asọmpi asọmpi karịa ndị ọzọ na-enye otu ụdị ngwaahịa ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ mmemme ọchị na Twitch ma nwee ụmụazụ 100,000, ebe onye asọmpi na-enye otu ụdị ntụrụndụ nwere naanị ndị na-eso 100, ohere ọ bụ bụ na ndị na-eso ụzọ ga-ege ntị na ọwa gị kama nke ha. Inwe nnukwu ihe na - eme ka ọwa gị nwee ọfụma ebe ọ na - eme ka ntụkwasị obi gị dị ka onye na - eweta ọdịnaya dị mma, na - atọ ụtọ.
8. Ọdịnaya ọdịnaya
Nnukwu ndị na-ege ntị nwere ike inye aka gbasaa ọdịnaya gị n'ọtụtụ ebe. Mepụta na ịkekọrịta ọdịnaya dị mma kwa ụbọchị na-enyere aka n'ịgbasa ọdịnaya gị n'etiti netwọkụ gị na netwọkụ nke ndị na-eso ụzọ gị. Ọ bụrụ na mgbalị ị na-eme n'ịzụ ahịa na-aga nke ọma, ndị na-ege gị ntị nwere ike ịkekọrịta egwuregwu gị ọtụtụ narị ma ọ bụ puku ugboro ugboro kwa ụbọchị. Cheedị ụdị mmetụta ọ ga-enwe na ika gị na gị dị ka iyi / okike.
9. Mma obi ike etoju
Na ngwụcha ụbọchị ahụ, ị ​​ga-enwe afọ ojuju na ọrụ ị lụrụ n'ịkpọkọta otu ndị nwere otu mmasị na agụụ mmekọahụ. Bụ onye nhazi otu a ga - enyere gị aka ịnya isi maka ihe ndị ị rụzuru. Ihe ịga nke ọma gị ga - enyere aka nwekwuo ntụkwasị obi na okwukwe ị nwere n’ime onwe gị ma nye gị nka ị ga - eji na - arụ ọrụ gị.
Kedụ ka m ga - esi tolite ndị na - eso ụzọ na chanel Twitch m?
Asingbawanye ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ ị nwere na Twitch nwere ike nweta site n'ụzọ dị iche iche. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime ya site n'ịkwụ ụgwọ ego, nke ahụ dị mma. Mana ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nweta karịa ndị na - eso ụzọ n'efu, nke ahụ ka mma!
Nke a bụ eziokwu banyere iji Twitch dị ka onye na-enweta ego: ọ nwere ike inyere gị aka nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị nwere ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-eso ụzọ na ọwa gị. Na mbu, ọ ga-ewe obere mbọ tupu ịmalite ịhụ ọtụtụ ndị na-eso ụzọ. Site n'iji nlezianya na atụmatụ eme ihe, ị ga-aga n'ụzọ iji nwee ọrụ na-aga nke ọma na akaụntụ nnabata gị.
Ọ bụrụ n'ị na - achọ inweta ndị na - eso ụzọ Twitch n'efu, enwere ọtụtụ ụzọ ị ga - esi mezuo nke ahụ. N'aka ozo, oburu na ichoro imefu ego site na ahia ahia gi, enwere otutu nhọrọ maka nke a. Agbanyeghị, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji kpochapụ nhọrọ gị n'efu tupu ị gbanwee ndị akwụ ụgwọ.
Abamuru nke na-eto eto Twitch na-eso n'efu
Ọ bụrụ na ị na-amalite site na ọwa Twitch gị, jiri usoro n'efu iji bulie ndị na-eso ụzọ gị na mbụ. Ọ ga - enyere gị aka ịnwale echiche gị n’ụzọ mmefu ego. Ọ na - enyere gị aka ịghọta otu ị nwere ike isi bulie ọwa gị nke ọma maka usoro dị iche iche n'efu na ịkwụ ụgwọ dị adị.
Site na nke ahụ, ka anyị hụ ụzọ ụfọdụ ị ga - esi bulie ndị na - eso ụzọ Twitch gị n'efu.
1. Jiri Streamular.com maka ndị na-eso ụzọ Twitch
Na-agụ edemede a na Streamular.com, onye na - eweta ndị na - eso ụzọ Twitch n'efu, yabụ naanị ihe ezi uche dị na anyị kpọtụrụ ọrụ anyị. Agbanyeghị na enweghị isi, anyị mepee ikpo okwu anyị ka anyị bụrụ ezigbo onye ọrụ yana ọ dị mfe maka onye ọ bụla chọrọ inweta ụmụazụ Twitch n'efu. Naanị ịgbaso ndị ọrụ Twitch ndị ọzọ nwere mmasị yiri nke a, na nloghachi, netwọkụ anyị nwere ndị ọrụ Twitch ndị ọzọ nwere mmasị yiri nke a na-eso gị.
Nwere ike ịgbalite atụmatụ efu kwa ụbọchị wee laghachi kwa ụbọchị iji rụọ ọrụ ya ọzọ. Yabụ, ikwe ka ị bulie akaụntụ Twitch gị n'efu.
Ọ bụrụ na ịnweghị mmasị n'ịrụ ọrụ ịga na Streamular.com na ịgbaso profaịlụ ndị ọzọ mgbe ọ bụla ịchọrọ karịa ndị na-eso ụzọ Twitch, mgbe ahụ ị nwere ike ịbanye na atụmatụ akwụ ụgwọ, nke chọrọ ka ị soro ndị 0 wee na-agba ọsọ na akpaghị aka, na-enyefe ndị na-eso ụzọ gị profaịlụ kwa ụbọchị na-enweghị mkpa ibuli mkpịsị aka gị ma ọ bụ laghachi na weebụsaịtị.
Ọtụtụ puku ndị ọrụ Twitch na-amalite inweta ndị na-eso ụzọ Twitch n'efu site na ọrụ anyị, mana maka nsonaazụ kachasị dị irè, anyị na-akwado ịme ihe ndị ọzọ iji mee ka ndị na-eso gị. Biko gụọ ịmụtakwu ụzọ iji bulie ụmụazụ Twitch gị n'efu.
2. Lelee ọwa Twitch nke ndị iyi ndị ọzọ na-asọ
N'ịbụ onye na-elekọta mmadụ, Twitch nwere ike inyere gị aka ma ọ bụrụ na ị njikọ na ya. I nwere ike ime nke a n'ọtụtụ ụzọ. Gwa ndi ozo iyi okwu ma lelee ihe omuma ha. Soro ha na-akparịta ụka n’ebe a na-akparịta ụka ma na-anabata ozi sitere na ma ndị na-anụ ọkụkọ ma ndị na-ege ntị. Gosipụta mmasị ịmatakwu banyere ọdịnaya ndị ọzọ ma jaa ha mma na ihe ọmụma ha ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọta ọdịnaya ha na-atọ ụtọ.
Mgbe ndị ọrụ ndị ọzọ hụrụ na ị nwere mmasị na enyi, ha ga-achọ iso gị laghachi. Ọ bụrụ na onye iyi ama ama kpebiri iso gị, ohere ọ ga-abụ bụ na ndị na-akwado ha ga-ebido soro gị.
Zụlite mmekọrịta gị na ndị ọzọ na-asọ asọ bara uru ebe ọ bụ na ị nwere ike ịjụ ibe gị ka ha nọrọ n'ụlọ ma ọ bụ kwalite ọwa gị. Mkpakọrịta nwere ike ibute ezigbo ikpughe maka akara gị ma nwee ike iwulite njirimara gị. Mgbe ị na-arụ mmekọrịta ndị a, gbaa mbọ hụ na ị nwere ezigbo mmasị ịme ndị enyi ndị ọzọ. Nke a nwere ike inyere gị aka igbochi inwe aha nke onye na-ajụ naanị ndị ọzọ maka nkwalite onwe onye.
3. Gaa online ihe na meetups
Knowingmara ndị ọrụ ndị ọzọ na ndị na-eso ụzọ gị ga-enyere gị aka ịnakọtakwu ihe ọmụma gbasara ọdịmma ndị mmadụ yana otu ha si achọpụta ma jiri Twitch. Gbalịa ijikọ ndị mmadụ na mpụga nke Twitch. Gaa nzukọ nzukọ n'ịntanetị, nzukọ, na nzukọ mmekọrịta ndị yiri ya ebe ị ga-amata ndị ọzọ nke ọma.
Nwekwara ike ịhọrọ ịga mmemme na-asọ asọ ma ọ bụ nzukọ egwuregwu vidio a na-eme kwa afọ na isi obodo gafee ụwa. Ọ bụ otu ụzọ kacha mma iji mee ka ndị na-eso ụzọ Twitch n'efu, nweta ndị enyi ọhụrụ, ma mụta ihe ndị ọzọ na-eme. Supanova, MineCon, na Twitch Con bụ ụfọdụ mmemme ewu ewu Twitch ị nwere ike ịga. I nwekwara ike lelee Facebook na Twitter maka obere Twitch na-ezute na ị nwere ike ime n'obodo gị ma ọ bụ na ntanetị.
Greatzọ dị mma iji mee njikọ na ihe omume bụ inyefe kaadị azụmahịa gị n'etiti ndị bịara ya. Jide n'aka tinye aha njirimara gị na Twitch yana njikọta na akaụntụ mgbasa ozi gị ndị ọzọ. Ọ bara uru ịnweta ozi a banyere gị dị mfe ebe ọ bụ na ndị ọzọ nwere ike jikọọ na ngwa ngwa site na ngwaọrụ ha ozugbo ha nwetara ozi ahụ.
4. Jiri weebụsaịtị ndị ọzọ na-elekọta mmadụ
Ọtụtụ ndị ọrụ Twitch amaghị mkpa ọ dị iji ọwa mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ iji bulie ikpughe nke akara ha. Nke a bụ ebe ndị ọrụ Twitch kacha elu na-eme ọtụtụ ihe na netwọkụ ha. Saịtị dị ka Instagram, Twitter, na Snapchat na-enyere aka na-eduga ndị ọrụ Twitch iji melite ndị na-eso ụzọ ha ma na-akparịta ụka mgbe niile.
Kwesịrị iji usoro mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị mee ihe ebe ọ bụ na nke ahụ nwere ike inyere gị aka ịme onwe gị na akara gị nye ndị na-atụ anya na-eso ụzọ bi n'akụkụ dị iche iche gburugburu ụwa. N'ụwa nke taa jikọtara ụwa nke ukwuu, mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike inye aka gboo ọdịiche nke anụ ahụ ma mee ka ndị na-ege ntị nwee ọ excitedụ gbasara mmasị na mmemme ndị yiri ya.
Ejila ihe ndekọ nke mgbasa ozi mmekọrịta gị biputere mmelite banyere ndụ gị. Jiri ya gwa ndị na-eso ụzọ gị gbasara ọdịnaya ọhụrụ. I nwekwara ike iji ọwa gị nwee mkparịta ụka gị na ndị na-eso ụzọ gị n'ụdị ntuli aka ma ọ bụ mmekọrịta Q&A ebe ị nwere ike ịchọ nzaghachi na ọdịnaya gị ma ọ bụ soro ha na-akpakọrịta. Nke a ga - enyere aka wulite onyonyo dị mma nke ika gị nke ndị na - eso ụzọ ga - atụ anya ka ha na ha na - emekọrịta ihe.
Buru n'uche na ikenye mpempe akwụkwọ na-akpaghị aka banyere ọdịnaya nke Twitch gị nwere ike ọ gaghị adị ka ọrụ. Kama, ị nwere ike ịhọrọ ịkekọrịta ọdịmma gị, ọrụ ị na-arụ ọrụ na ya, ihe ndị masịrị gị, ma ọ bụ ọbụna mmelite maka ihe iyi gị ga-abụ. Nke a ga - enyere aka mee ka ọwa gị mezie nkeonwe.
5. Developzụlite usoro maka ịghaghasị
Chọrọ iwulite iguzosi ike n'ihe na-eso Twitch? Nọgide na usoro nhazi oge na-agbanwe agbanwe. Melite ndị na-ege gị ntị tupu oge eruo gbasara mgbe ha kwesịrị ịmụrụ iji lee ọdịnaya gị. Mepụta usoro oge ma soro ndị na-ege gị ntị kerịta ya. Nke a bụ ụzọ magburu onwe ya isi wulite ntụkwasị obi na ndị mmadụ ma kwalite nlele kwa ụbọchị.
Ptnakwere usoro na-agbanwe agbanwe ga-eme ka ndị mmadụ tụkwasị gị obi. Ọ ga - enyere gị aka dịka onye ọkachamara nke ji ọrụ iyi egwu ha egwu egwu ma nwee ebumnuche gbasara ịkekọrịta ọdịnaya dị mma. Y’oburu n’itinyeghi ihe obula ma rapara na usoro ihe eji eme kwa ubochi, yabụ ndi n’ile ha anya dika ihe ichoro choro ihu ha aghaghi inwe otutu ihe ha gha ahu. N'ihi ya, ha ga-aga na chanel Twitch nke onye ọzọ ma ọ bụ ọbụna na saịtị ntanetị ndị ọzọ.
Ozugbo ịmalite ịdọta ndị na-eso ụzọ, ọ dị oke mkpa ijide ha aka ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ezie n'ịrụ ọrụ dị ka iyi. Ọtụtụ ndị na-egwu mmiri na-emehie nke ịghara ịmepụta atụmatụ maka ịkesa ọdịnaya mgbe niile. Workingrụ ọrụ oge niile ga - enyere gị aka ịhazi ma gosipụta ọwa gị na nke ndị ọzọ anaghị agbanwe agbanwe.
Soro ndị na-ekiri gị kerịta usoro ọdịnaya gị ka ha mara mgbe ha nwere ike ịtụ anya ịchọta gị na Twitch. Gụnye ihe ị ga-egwu na n'oge. Ọ bụrụ, n'ihi ihe ụfọdụ, enwere mgbanwe na oge gị, cheta iji usoro mgbasa ozi gị na ntanetị ma ọ bụ ndepụta ntanetị Twitch iji gwa ndị na-ege gị ntị banyere mgbanwe ahụ. Nke a ga - eme ka ndị na - ekiri mmasị nwee mmasị na ọdịnaya gị mgbe ọ pụtara ma nyekwa ha ihe kpatara ha ga - eji laghachi n’ọwa gị n’ọdịnihu.
Ọzọ ihe bụ na ị kwesịrị ị na hụ na-enuba ọdịnaya mgbe. Gụgharia ugboro ugboro na ogologo oge na - eme ka ndị mmadụ hụ gị. Site n'inye ndị na-ege gị ntị ọtụtụ ọdịnaya, ị na-enye ha uru maka akụrụngwa ha, nke ga-emetụta iguzosi ike n'ihe ha na itinye ego ha na chanel gị.
Knowmatakwu banyere otu ị ga - esi nweta ndị na - eso ụzọ Twitch n'efu, zitere anyị ozi ebe a, anyị ga - enwe obi ụtọ isoro gị kwurịta nhọrọ dị iche iche!
Kedu ihe kpatara m ji chọọ ndị na-eso ụzọ Twitch n'efu?
Anyị niile maara na ịnwe ọtụtụ ndị Fans nwere ọtụtụ uru na akaụntụ Twitch gị. Mgbe ị nwere ọtụtụ ndị Fans, ị na-enwetakarị mmasị, ọtụtụ echiche, na echiche ndị ọzọ.
Nke a na-enyere ndị na-achọ ibi ndụ ma ọ bụ nweta ikpughe site na iji Twitch. Mgbe ọtụtụ afọ nke ịbụ ndị isi na ụlọ ọrụ "Free Twitch Followers", anyị mepụtara usoro 100% Free maka ndị ọrụ iji nweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ Twitch kwa ụbọchị. Ha dị elu ma kwado gị maka ọdịmma gị.
Ndị a bụ ụmụazụ Twitch n'ezie?
Anyị na-enye ezigbo ndị Fans ndị ahịa anyị akwụ ụgwọ, n'adịghị ka 98% nke weebụsaịtị ndị dị ebe ahụ. Imirikiti weebụsaịtị ndị ọzọ na-ekwu na ha na-enye ọrụ a n'efu, mana ha anaghị eme ya! Anyị nwere ike ịnye ọrụ a n'efu n'ihi na onye ọ bụla na-akwado ya site na iji ọrụ ndị a na-eso ụzọ bụ onye ọrụ ọzọ dịka gị onwe gị.
Ọrụ anyị bụ obodo na-enye ohere ka ndị nwere uche chọta ibe ha ma jikọọ. Anyị bụ naanị onye ogbugbo. Ekwela ka saịtị ndị ghọgburu gị na-azọrọ na ha na-enye ezigbo ndị na-eso ụzọ. A na-ekwukarị na ọ bụrụ na ọ dị oke mma ka ọ bụrụ eziokwu, ọ ga-abụ… na nke zuru oke, anyị ga-ahụrịrị na ogo ndị na-eso ụzọ ga-adị iche. Nke a bụ n'ihi na ụfọdụ ndị na-etinye ọtụtụ mgbalị karịa na akaụntụ ha karịa ndị ọzọ. Nke a bụ otu ihe a ga-ekwu banyere Twitch n'ozuzu ya.
Ya mere, atụla ụjọ ma ọ bụrụ na otu nkeji ezigbo akara ngosi na-eso gị na oge na-esote oge onye nwere foto ole na ole na-eme ya. Agbanyeghị ọtụtụ ndị na-eso ụzọ a na-ezitere gị, a họpụtara ha na mmasị ndị ị họọrọ mgbe ị debanyere aha maka ọrụ anyị.
Kedu ka m ga-esi debe ndị na-eso ụzọ m?
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụ ọrụ anyị iji nyefee ndị ọhụrụ na ibe Twitch gị n'efu.
Ọ bụ ọrụ gị ime ka ha nọrọ ebe ahụ. Ọmụmụ ihe na-egosi na ọ bụrụ na ibe gị enweghị ọtụtụ ọdịnaya ma ọ bụ na ọ naghị enye ihe ọhụụ na itinye ọdịnaya na mgbe niile ọnụọgụ gị ga-ada.
Anyị na-eme ike anyị niile iji nye ndị nwere ọdịmma anyị. Nke a pụtara na ị na-eche na ibe gị na-enye ọdịnaya gbasara ọdịmma ị họọrọ tupu ịmalite ọrụ atụmatụ n'efu ma ọ bụ nke ị ga-akwụ ụgwọ ị ga-enwe ike ịchekwa ma bulie ibe gị.
Ndị ọkachamara na-atụ aro na ịdepụta ọdịnaya dị mma 1-3 oge ọ bụla yiri ka ọ na-adọta nsonaazụ kacha mma. Ọ dị mkpa iwepụta oge gị na post gị. Gbaa mbọ hụ na foto / vidiyo dị mma ma metụta isiokwu nke Instagram gị. N'ikpeazụ, gbaa mbọ hụ na gị na ndị na-ege gị ntị na-emekọrịta ihe. Ọ bụrụ na ha na-ekwu na gị posts ijide n'aka na-aza ha. Ọzọkwa tụlee ileta ibe ha ma nye ha otu ihe ma ọ bụ abụọ. Ọ ga-aga n'ụzọ ma a bịa n'ịmekọrịta mmekọrịta ogologo oge na ibe gị.
Otu esi eji egwuregwu Twitch weta ego maka onyinye?
Ịchịkọta ego adịghị ka nke ọ na-adịbu. Site na ịntanetị, ịnakọta ego dijitalụ eruola ọkwa ọzọ. N'ezie, enwere ọtụtụ nyiwe na-enye nhọrọ ...
Ndụmọdụ maka ịhọrọ egwu kacha mma maka iyi iyi Twitch gị
Ịkpọ egwuregwu vidiyo na-ewe nnukwu ọrụ. Ọ bụrụ na ị leba anya na ndị na-egwu mmiri kachasị elu, ị ga-achọpụta na ha jisiri ike nwe n'ọgbọ agha mgbe ...
Kedu ihe kpatara Twitch ji bụrụ nnukwu ọwa maka ịma mma Vloggers iji nwalee usoro etemeete
Ruo ogologo oge, ndị na-ede blọgụ mara mma na-edebe naanị YouTube na Facebook. Site na ọbịbịa nke Instagram na Instagram reels, vlogers mara mma chọtara ebe ọhụrụ. Agbanyeghị, ịma mma ...
Anyị na-enyekwu Ọrụ Mgbasa Ozi
Ọrụ ikuku Ọrụ Instagram Ọrụ Twitter Pinterest Ọrụ Ọrụ YouTube Ọrụ na-arụ ọrụ Ọrụ SoundCloud
Maka ọrụ Instagram, biko gaa na websaịtị ibe anyị, MrInsta.com. Pịa ebe a ka ịlele ọrụ Instagram ha
Maka ọrụ YouTube, biko gaa na websaịtị ibe anyị, SubPals.com. Pịa ebe a iji lee ọrụ YouTube ha
Chọrọ ndị na - eso ụzọ Twitch n'efu, dị elu ma lekwasịrị anya kwa ụbọchị?
Soro ọtụtụ puku ndị mmadụ na-eji Streamular eme ihe kwa ụbọchị iji nweta ndị na-eso ụzọ Twitch n'efu ma nwee mmasị maka ọwa ha!
Nweta n'efu, ogo dị elu ma lekwasịrị ndị na-eso ụzọ Twitch naanị ole na ole site na Internetntanetị tụkwasịrị obi na-eweta ọrụ Twitch.
Nwebiisinka © 2022 Streamular. Ikike niile echekwabara. Sitemap